ချစ်ရအောင်: Zawgyi Font ဒေါင်းရန်လေး ဘလော့မှာ ထားမယ်
Zawgyi Font ဒေါင်းရန်လေး ဘလော့မှာ ထားမယ်
ခုတင်ပေးးတာလေးတွေကတော့ မိမိတို့ ဘေလာ့မှာ Zawgyi Font လေးတွေကို ဒေါင်းယူရန်ဆိုပြီး ပုံလေးနဲ့ တပါတည်းထားခြင်သူများအတွက်ပါ... တောင်းဆိုထားတဲ့ အတွက် သိပြီးသောသူများ
zawgyi font install လုပ်ဖို့widget ဘလော့မှာတင်ချင်လို့ ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ကူညီပါဗျာ........
ဒါကတော့ zawgyi 64 bit အတွက်ပါကုဒ်ပါ
<a href="http://www.mediafire.com/?7c6kp5oc6tybkkd" style="background-color: white;" target="_blank"><img style="width: 173px; height: 70px;" src="http://i1053.photobucket.com/albums/s474/lwinminbo1/a967ee22.gif" /></a></div>
ဒါကတော့ zawgyi 32 bit အတွက်ကုဒ်တွေပါ.
<a href="http://www.mediafire.com/?ked640h47r75512" style="background-color: white;" target="_blank"><img style="width: 173px; height: 70px;" src="http://i1053.photobucket.com/albums/s474/lwinminbo1/1e6ff304.gif" /></a></div>
►5. ပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကို ကော်ပီယူ ထည့်လိုက်ပါ
မှတ်ချက် ။ ။ ကုဒ်တွေကို မိမိတို့ ဘေလာ့မှာ တန်းထည့်ပေးယုံပါဘဲဗျာ... အ၀ါနောက်ခံနဲ့ လင့်
ကတော့ ဒေါင်းလင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်.... အစိမ်းနု နောက်ခံကတော့ ပုံရဲ့လင့်ပါ...
ပုံလင့်ကိုတော့ မိမိတို့ ကြိုက်တဲ့ ပုံလင့်ကိုဘဲ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
<<<မန်ဘာဝင်ပြီး...Fb Like ခြင်းဖြင့် အားပေးကြပါနော်>>>အောင်အောင်(မကစ) ပိုင်ဆိုင်သော နေရာလေးများကိုလာလည်ကြပါ။
zaw lin said...
26 January 2013 at 00:04